Ikhasi eliyisiqalo - I-Ashby ne-Graff Real Estate
Izindlela Zokuphila ze-A & G
Izakhiwo Zenziwe Lula
ASHBY & GRAFF ®
Sibeka isisekelo sobuqotho bokuziphatha phakathi kochwepheshe baseCalifornia bezakhiwo. Siyiqembu labathengi abakhetheka kakhulu, abazinikele ekunikezeni insizakalo efanayo futhi eqotho kuwo wonke umuntu esenza ibhizinisi nathi. Injongo yethu isekela amaklayenti ethu kanye nemiphakathi yesifunda esiyithandayo. Zibonele umehluko we-Ashby ne-Graff ngokwakho!
Kwangathi 7, 2020
Kwangathi 3, 2020
ILa Cañada Flintridge
Kwangathi 2, 2020
I-Palos Verdes Estates
Ukuthola indawo ekahle yokushayela ekhaya kungenye indlela esisiza ngayo ngokuthenga kwakho nomhlaba. Njengabenzeli bezindawo ezithengiswayo, sinokufinyelela okuqhubekayo kochwepheshe kuyo yonke inkambu ehlobene ukusuka ekubolekeni kuya ekuphambukeni
Siyazi ukuthi yini eyenza izindlu zithengiswe: Amanani entengo, imibukiso, nokumaketha. Ukuthengisa ikhaya lakho kuyisinqumo esikhulu, ngakho-ke kubalulekile ukusebenza nochwepheshe ongabethemba ukuthi umsebenzi wenziwe kahle.
Ufuna ukuqasha noma ufuna umqashi? Noma iyiphi indlela, singumenzi wakho womdlalo ophelele. Sisiza ekuqondiseni abaqashayo ngenqubo yokuthola nokufaka isicelo sendlu, futhi sisiza abanini bezindlu ukuba bathengise izakhiwo zabo ngokuphelele.
Isethembiso se-Ashby ne-Graff
Isethembiso sethu ukuhlinzeka ngezinga elingakaze libonwe lokwenza kahle nokwethembeka kumakhasimende ethu. Noma ngabe ukuthenga noma ukuthengisa ikhaya, inqubo ingaqhuba i-gamut yemizwa - iyakhathaza, iyesabisa, iyajabulisa - futhi silapha ukusiza ukuphatha lokho. Sithokozela amandla ethu angaxhunyiwe wokuxhumana namakhasimende ethu ezingeni lomuntu, ngakho-ke uzizwa ukhululekile ngaso sonke isinyathelo senqubo.
E-Ashby & Graff® Real Estate, sikholelwa ekusetshenzisweni okulinganayo futhi okungahlukanisiwe kulo lonke iklayenti, ngaphandle kwesabelomali noma umgomo. Umhlaba ungaba indawo edidayo, kepha ukuthola indawo yakho efanele kuyo bekungafanele ukuba ube lapho.
Ungakuqeda Kanjani Ukuhlasela Kwezinambuzane Ekhaya Lakho
Izinambuzane ziyinkinga evamile. Kwesinye isikhathi noma ngabe uhlanze kahle kanjani izinambuzane zakho zasekhaya zikwazi ukungena. Zinamasu acasulayo ngaleyo ndlela. Kepha ungesabi-kunendlela yokususa le minhlupho ebabazekayo ukuze wena, umndeni wakho, nezilwane ezifuywayo niphile ...
Okufanele Ukwazi Ngama-generator Wokwenza Isipele
BOOM. Ukuduma kuzamazamisa ikhaya lakho. Izibani ziyakhanya bese ziyacima, zikufake ebumnyameni. Izingane zakho ziza zikhala ekamelweni njengoba ukuduma okuningi kuphazamiseka ngaphandle. Ukucisha ugesi, njengalokhu kuchaziwe, akuyona into eyenzeka njalo esizweni sonke. Ngenxa ...
Ungayakha Kanjani Ingaphakathi Lekhaya Ungaziqhenya Ngalo
Uma uthenga indlu, uqala kancane ngoseyili ongenalutho. Ukusuka lapho, ungeza ifenisha nokuhlobisa. Lokhu kuyingxenye yenqubo eshintsha indlu ibe yikhaya lakho. Ngesikhathi usuqedile, kubalulekile ukuthi ube nengaphakathi ozoba ...
Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuhamba Phambili ne-Big DIY Project
Amaphrojekthi wokuphucula ikhaya ayindlela enhle yokuqhakambisa inani lekhaya lakho uma ulungiselela ukuthengisa ikhaya lakho noma ubheke nje ukwakha ezinye ukulingana. Amanye amaphrojekthi alula futhi awadingi ubuchwepheshe obuningi. Abanye badinga ukucatshangelwa okwengeziwe. Uma ...
Luyini Luhlelo lwaMshwalense Wavelonkhe?
I-intshi eyodwa yamanzi ezikhukhula esakhiweni singadala izinkulungwane zomonakalo. Umnini khaya ojwayelekile akaboni lelo qiniso futhi akacabangi kabili ngezikhukhula. Kodwa-ke, isiphepho noma imvula enkulu iyadingeka ukuze kube nesikhukhula. Ngisho nesivunguvungu esincane siholela ...
I-Ashby & Graff Ishicilela i-2020 Diversity Report
Namuhla, sikhiphe umbiko wethu wokuhlukahluka kuka-2020. Lo mbiko wabiwa esidlangalaleni ngethemba lokuthi abanye abathengisi bezindlu ezweni lonke bamukela zonke noma izingxenye zohlelo lwamaphuzu ayi-10 lokuhlukahluka okubanzi nokufakwa embonini yethu nangale. Ku ...
Umthetho we-American Dream Down Payment Uzosiza Abanini Bekhaya Abalondoloziwe Gcina
Ngo-Agasti 4, 2020, amaSenators uCory Gardner (R-CO) noDoug Jones (D-AL) bethule umthetho we-American Dream Down Payment Act ka-2020. Lo mthetho odingida usizo uzosiza labo abafuna ukuthenga amakhaya ukuthi balondoloze imali ekhokha. Ukukhokha phansi kungenye yezingqinamba ezinkulu ...
Izizathu Zokuthi Wonke Umninikhaya Kufanele Alondoloze Isikhwama Sokulungisa
Wonke umnikazi wendlu kufanele aqale isikhwama sokulungisa izimo eziphuthumayo. Kunohlu olude lwezinto esikhwama sezimo eziphuthumayo ezingasiza ekuzikhokheleni - nazi ezimbalwa kakhulu ezivame kakhulu. Izimpahla ezaphukile Izisetshenziswa ezaphukile zingabiza ngendlela emangalisayo. Isikhwama sokulungisa izinto sizofika kahle uma ...
Ungayisebenzisa Kanjani Ukuvuselelwa Kwesabelomali Ukwenza Ikhaya Lakho Libe Sithekile
Ukulungiswa kwasekhaya kuyindlela enhle yokuguqula indlu ibe yikhaya. Bayakuvumela ukuba wenze ngezifiso ukuze zivumelane kahle nezidingo zakho kanye nezinto ozithandayo. Baphinde banamandla wokukhulisa inani lemakethe yekhaya lakho, elingaba lihle uma ulindele ukuthengisa ikhaya lakho ...
Izimfihlo eziyi-8 Zokuphumelela Kwendlu Ukuphumelela
Uma ubuka iTV engokoqobo eyanele, ukushaya indlu kubonakala kulula ngokwanele. Uthenga impahla, wenze umsebenzi omncane phakathi nempelasonto, futhi uyathengisa kungakapheli amasonto ambalwa. Akulula neze njengoba imibukiso ye-TV yenza kubonakale, kepha akusona isimanga esikhulu impela. Labo abehlulekile e ...
Ingabe usukulungele ukuqala?
Amanani ethu ayisisekelo - asebenzayo, athembekile, anokuziphatha okuhle - ahlanganisa ukuchaza ukuthi singobani futhi nenkonzo yethu enikeza amaklayenti ethu usuku nosuku.
Ikheli leposi: 6555 Barton Ave 2nd Floor.
I-Los Angeles, CA 90038
I-CAL DRE: 02041450 © 2020 GRAFF REAL ESTATE, INC .BONKE AMALUNGELO AXELWE. I-ASHBY & GRAFF® KANYE NE-ASHBY & GRAFF LOGO YAMAMAKI EMISEBENZI ATHUNYWA NGEGRAFF REAL ESTATE, INC. GRAFF REAL ESTATE, INC. KAKHULU BASEKELA IZIMISO ZESITHEMBISO SOMTHETHO WOKUFINYELELA KANYE NOMTHETHO WOKUFINYELELA.
Ungathengisi Imininingwane Yami